Coronavirus inokanganiswa nehunyanzvi, kugadzirwa uye mutengo | Linux Vakapindwa muropa
Dambudziko iro parizvino riri kubuda kubva ku "Coronavirus" muChina, nkana yakangomutsa kunetsekana nezve kurasikirwa nehupenyu uye kuti iko kuedza kuri kuitwa pasi rese kuti vaone nenzira inokasira vatakuri vaive muWuhan kana vakasangana nemunhu ane hutachiwana vabude mukutonga.
Kana zvisiri, iri kutanga zvakare kuburitsa matambudziko muindasitiri indasitiri Uye ndezvekuti vazhinji venyu muchazoziva, China ndiyo imwe yenyika dzinotumira zvigadzirwa zvakawanda kune nyika dzakasiyana, uye zvakare iri nyika uko kwakasiyana nemakambani makuru ane mafekitori avo ekugadzira, ndizvo zvakaita Apple.
Uye ndiko kutya kwekutapukira pakati pevashandi yemafekitori yakaunza matambudziko nekutumirwa Nekuti kuchine zvinetseke nezve chinogona kuitika chinotapukira chinogona kugadzirwa nekutambira zvigadzirwa kubva kuAsia nyika (kunyange zvisati zvaratidza kuti izvi zvinogona kuitika).
Zvakanaka kubva kuvashambadzi vadiki vari kuita kutengesa zvigadzirwa pamawebhusaiti anozivikanwa, akadai saAlibaba, AliExpress, Chinavasion, DealExtreme, nezvimwe. Kunyangwe makambani makuru emarudzi akawanda zvakakanganiswa, nekuti nekuda kwedambudziko kudzima kwakawanda kwakagadzirwa nevatengi uye kunyangwe nevanozvigovera pachavo.
Zvese izvi Yakagadzirwa nekushaikwa kwevashandi uye kunonoka kuvhurwa kwemafekitori yakavharwa ikozvino, iyo yatanga kuratidza kudzikisira mukugadzirwa kwezvinhu zvemagetsi.
Mishumo yacho online uye indasitiri muongorori ruzivo ratidza kuti mafekitori akasiyana siyana ari munzvimbo yepakati yechirwere checoronavirus, vari kusangana nekunonoka mukugadzirwa, iyo inofanirwa kuve nemhedzisiro pakupa uye mutengo wezvinhu zvakawanda.
Chimwe chezvigadzirwa izvi LCD skrini, nekuti mafekitori anosvika mashanu muWuhan akavhara kudzivirira kupararira kwecoronavirus uye semhedzisiro iri kutanga kuburitsa kuwedzera kwemitengo yezvikwiriso, nekuda kwekudzikiswa mukugadzirwa uye chigadzirwa kuwanikwa.
Zvese izvi zvinofanirwa kuve nemhedzisiro yakanangana pamutengo weLCD mapaneru uye pamwe nemhedzisiro pamhedzisiro yekugadzira laptop zvakare.
Inofanira kuonekwa kuti parizvino Intel ne AMD havana kutaura nezvazvo yemhedzisiro yemakoronavirusi pane zvaakafungidzira, nepo Microsoft yechikamu chayo yakazviita nekufungidzira kwakakwirira kupfuura kwakajairika kwehafu yepiri.
Kune rimwe divi Apple imwe kambani yakabatwa nekuda kwechirwere checoronavirus, kubva Mugovera wadarika chakazivisa kuti ichavhara zvitoro zvayo zvese zvepamutemo, mahofisi emakambani nenzvimbo dzekutaurirana muChina kusvika Kukadzi 9.
Sezvo coronavirus kubuda kwakaziviswa hutano hweveruzhinji emergency nyika neWHO uye yakatanga kuvharirwa kwekutanga nekumanikidza vatorwa kuti vasadzoke kubva kuChina.
Iyo kambani yakatanga kuvhara zvitoro zvitatu muChina kutanga kwesvondo rapfuura nekuda kwekunetseka nezvekupararira kwehutachiona.
Apple yakati mune chirevo:
"Seyambiro yekuchengetedza uye yakavakirwa pazano razvino kubva kumatungamiriri anotungamira ezvehutano, tichavhara mahofisi edu ese, zvitoro nenzvimbo dzekutaurirana mu mainland China kusvika Kukadzi 9." Kambani iyi yakatiwo inotarisira kuvhura zvitoro "nekukurumidza sezvazvinogona."
Kunze kweApple, Vamwe vatengesi vekunze vabatana, kusanganisira Starbucks Corp uye McDonald's Corp, kuvhara kwenguva pfupi zvitoro zvayo seyambiro yekuchengetedza.
Mamwe makambani mazhinji akakumbira vashandi vavo muChina kuti vashande kubva kumba uye varegedze kukosha kwebhizinesi mukati mevhiki yekutanga yaFebruary.
Finalmente kuwedzera kwezvigadzirwa zvakasiyana zvinotarisirwa, kuwedzera pakuderera kwekupinza kunze kwenyika uye pamusoro pezvese kuti kana dambudziko iri nedenda rikaramba richienderera kwenguva yakareba, izvi zvinokanganisa zvikuru kwete pakushomeka chete asiwo makambani mazhinji anogona kutanga kufunga nezve kugovaniswa kwekugadzirwa kwezvigadzirwa zvavo kuChina.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Coronavirus inokanganiswa nehunyanzvi, kugadzirwa uye mutengo
Vulkan kuenderana neiyo Raspberry Pi 4 yatove mumabasa